चीन ASRS स्ट्याकर क्रेन + प्यालेट धावक कारखाना र निर्माताहरू EBIL
१. 1.5 / १.8 / २.० / २.3 / २. / / २.7575 / 3.0.० मिमी
1000-5000kg / स्तर
११8०० मिमी अधिकतम
आईएसओ, सीई, एसजीएस, भोभ
१. प्रश्न: के तपाईं वितरक वा निर्माता हुनुहुन्छ? A: हामी करीव २० बर्षको लागि पेशेवर र अग्रणी निर्माता हौं। हामी हाम्रो ग्राहकहरूको बीचमा धेरै उच्च प्रतिष्ठा भएका उच्च गुणस्तरको प्यालेट र्याकि,, मल्टी शटल प्रणाली र रोडिओ शटल रैकिंग, ASRS उत्पादन र निर्यात गर्दछौं। हाम्रो एनुअल उत्पादन क्षमता १०,००,००० टन र्याक कम्पोनेन्ट्स र शटल कारको १,००० एकाइ हो। २. प्रश्न: कुन कुराले तपाईंलाई अरूसँग फरक बनाउँछ? A: १) हामीसँग mechanical० भन्दा बढी मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल र सफ्टवेयर ईन्जिनियरहरू छन्। EBILTECH सँधै उत्पादन आविष्कार र अनुसन्धान र विकासलाई ठूलो महत्व दिन्छ। योसँग यसको आफ्नै अनुसन्धान र विकास टोली मात्र छैन, तर यसले घरेलु प्रख्यात अनुसन्धान संस्थानहरूलाई सहयोग गर्दछ, ताकि उद्यमको टेक्निकल बल निरन्तर बढाउन सकियोस्। हाम्रो स्वतन्त्र अनुसन्धान र डब्ल्यूएमएस प्रणाली र डब्ल्यूसीएस प्रणालीको विकास। हामीसँग बढी छ National० राष्ट्रिय पेटन्ट। २) हाम्रो उत्कृष्ट सेवा द्रुत, कुनै परेशानी उद्धरणको लागि मात्र हामीलाई ईमेल पठाउनुहोस् हामी २ 24 घण्टा भित्र मूल्यको साथ जवाफ दिने वचन दिन्छौं - कहिलेकाँही घण्टा भित्र पनि। यदि तपाईंलाई सल्लाह चाहिएको छ भने, ० export86-२5-2275757२० at मा हाम्रो निर्यात कार्यालयमा कल गर्नुहोस्, हामी तपाईंको प्रश्नहरूको जवाफ तुरून्त दिनेछौं। )) हाम्रो द्रुत विनिर्माण समय सामान्य अर्डरहरूको लागि, हामी २०--30० दिन भित्र उत्पादन गर्ने वाचा गर्छौं। एक manufactoiy को रूपमा, हामी औपचारिक अनुबंध अनुसार वितरण समय एस्सोर गर्न सक्छौं। Q. प्रश्न: स्थापना र डिबगिंग सेवाहरू के हो? A: हामीसंग सम्पन्न समुहको अनुभव सहितको स्थापना टोलीहरू छन्। रेडियो शटल कार को लागी, हामी ईन्जिनियरहरु डिबगिंग र प्रशिक्षण को लागी साइट पठाउन हुनेछ। र्याकिंग प्रणालीहरूको लागि, हामी हाम्रो आफ्नै टीमहरूद्वारा स्थापना गर्न सक्दछौं वा अपरेसनहरू अपरेसनलाई निर्देशित गर्नका लागि नियुक्ति गर्न सक्दछौं। हामी दक्षिण एशिया, अमेरिकी, यूरोपीयनमा धेरै प्रोजेक्टहरू गरिसकेका छौं। Q. प्रश्न: MOQ के अर्डर गर्न सक्छ? A: सामान्यतया एक २० फिट कन्टेनर हो, तर ठूलो परिमाण राम्रो मूल्यको साथ आउँछ Q. प्रश्न: भुक्तानी के हो? A: T / T वा LC
अघिल्लो: कारखाना प्रत्यक्ष स्टील संरचना गैरेट शेल्फिंग प्लेटफार्म फ्लोर रैक
अर्को: सीई प्रमाणपत्रको साथ इलेक्ट्रिक चल योग्य रैकि।
बहु-तह शटल , लेनवे शटल , स्टील प्लेटफार्म , स्ट्याकर , शटल Asrs , प्लेटफार्म बिक्री ,